Akụkọ - Global Faiba glaasi Industry
Faiba glaasi ahịa n'ụwa nile na-atumatu-eto site US $ 7 Ijeri, chụpụrụ site a njọ uto nke 5. 9%. Wool Glass, otu n'ime ngalaba ndị enyocha na nha na ọmụmụ ihe a, na-egosipụta ikike itolite na 6.
Febụwarị 04, 2020 13:58 ET | Isi mmalite: ReportLinker
New York, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com na-ekwupụta mwepụta nke akụkọ "Global Fiberglass Industry" - https://www.reportlinker.com/p05798567/?utm_source=GNW
8%. Ihe mgbanwe dị iche iche na-akwado uto a na-eme ka ọ dị oke egwu maka azụmaahịa dị na mbara igwe a na-eche banyere mgbanwe ahịa nke ahịa a. N’ikwesiri iru ihe ruru ijeri US $ 6.2 site n’afọ 2025, Uko Wool ga-eweta uru bara uru na-agbakwunye
Oge dị mkpa maka uto ụwa.
- N’ịnọchite mba mepere emepe, United States ga - ejigide ogo uto 5%. N'ime Europe, nke na-aga n'ihu na-abụ ihe dị mkpa na akụ na ụba ụwa, Germany ga-etinye ihe karịrị US $ 250 Million na mpaghara mpaghara na
clout na-esote 5 ruo 6 afọ. Ihe kariri US $ 210.9 Nde ruru ihe atumatu olu na mpaghara a ga-esi na ahịa Europe fọdụrụnụ. Na Japan, uko mkpuchi ga-erute nha ahịa nke US $ 241.3 Nde site na njedebe nke oge nyocha. Dị ka akụ na ụba ụwa nke abụọ na ụwa na onye na-agbanwe egwuregwu ọhụrụ n'ahịa ụwa, China gosipụtara ikike itolite na 8.8% karịa afọ ole na ole sochirinụ ma gbakwunye ihe ruru ijeri US $ 1.9 n'ihe banyere ohere enwere ike iji buru ya.
achụmnta ego na ndị isi ha ma ama. E gosipụtara na eserese ọhụụ bara ụba bụ ndị a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa ịmara data dị mkpa iji hụ na mkpebi nke atụmatụ, ọ bụrụ na ọ na-abanye n'ahịa ọhụrụ ma ọ bụ na-ekenye ihe onwunwe
n'ime pọtụfoliyo. Ọtụtụ ihe akụ na ụba na ikike ahịa dị n'ime ga-emetụta uto na mmepe nke usoro achọrọ na mba ndị na-etolite na Asia-Pacific, Latin America na Middle East. Echiche nyocha niile e gosipụtara bụ
dabere na nkwado sitere n'aka ndị na-eme ihe ike na ahịa, ndị echiche ha karịrị usoro nyocha ndị ọzọ niile.